किन गर्मी मौसमा अत्याधिक मानिस बिरामी पर्छन् ? यसमा बच्ने कसरी ? - Everest Dainik - News from Nepal
किन गर्मी मौसमा अत्याधिक मानिस बिरामी पर्छन् ? यसमा बच्ने कसरी ?
२०७५, १९ जेष्ठ शनिबार
सामान्य स्वास्थ्यसंस्थामा गएर उपचार गर्न पनि सकिन्छ । तर यि बाहेक गर्मीयाममा सबैभन्दा धेरै हुने अन्य जटिल खालका रोग भनेको मलेरिया, कालाज्वार, टाईफाईड, जन्डिस आदि रोगहरु हुन ।
ट्याग्स: गर्मी मौसम